SkySafari sy NoLocation, fampiharana roa lehibe amidy fotsiny izao | Vaovao IPhone
SkySafari sy NoLocation, fampiharana roa lehibe amidy fotsiny izao
Manohy amin'ny Vaovao IPhone mikaroka sy mampiseho anao ny sasany, ny sasany amin'ireo tolotra tsara indrindra sy fampiroboroboana hita ao amin'ny App Store. Ary anio, eo antenatenan'ny herinandro, manolotra fampiharana roa lehibe ianao.
Raha manahy ianao afaka fantatry ny lehibenao hoe aiza ianao no naka an'io sary io izay nozarainao tao amin'ny Twitter, na raha liana te hahalala ianao fantaro ny zava-miafina ny habakabaka, avy eo dia mila maika ianao satria ireo fangatahana roa atolotra anio dia mandritra ny fotoana voafetra ihany. Aza mandeha mimenomenona fa mihazakazaha mitady azy ireo.
Ny ankamaroan'ny ankamaroantsika rehetra dia manahy ny amin'ny fiainantsika manokana, kanefa, rehefa maka sary isika ary mizara azy ireo amin'ny media sosialy, dia mizara, angamba tsy fantatsika koa, ny toerana nakana ny sary, satria ity fampahalalana ity dia voatahiry ao amin'ny metadata sary .
Araka ny anarany, «NoLocation» dia fampiharana azonao atao esory amin'ny fomba tsotra ny mombamomba ny toerana. Raha vantany vao nesorina ity fampahalalana ity dia hisokatra ho azy ny menio fizarana mba hahafahanao mandefa izany amin'ny Twitter, Facebook na amin'izay tianao, fa tsy manambara izay nalaina io sary io.
NoLocation dia manana vidiny mahazatra 3,49 euro, kanefa izao, raha maika ianao, dia afaka mitazona ny fiainanao hitokana-monina bebe kokoa maimaim-poana.
Na mpankafy astronomia ianao, na raha tsy nijanona nieritreritra mihitsy taloha fa misy mihoatra ny hitan'ny masonao rehefa mijery ny lanitra SkySafari 5 Izy io dia fampiharana izay, azoko antoka fa ho tianao.
Mifanaraka amin'ny iPhone sy ny iPad dia manolotra izy fampahalalana momba ny kintana 120.000 mahery, kintana, planeta, satelita ary maro hafa. Afaka miaina izany ianao fanakona-masoandro, lasa na ho avy, fantaro ny momba ny International Space Station, raiso ny fampandrenesana rehefa mihoatra ny lohanao izany, fantaro ireo zanabolana amboarina manodidina ny Tany sy maro hafa. Raiso fotsiny ny iPhone-nao, tondroy ny lanitra, ary SkySafari 5 dia hahita anao izay rehetra afenin'ny lanitra. Mazava ho azy, amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy amin'ny teny anglisy ilay fampiharana.
SkySafari 5 dia manana vidiny mahazatra € 3,49 fa izao dia azonao atao amin'ny € 1,09 fotsiny amin'ny fotoana voafetra. Etsy ankilany, ny kinova Mac dia amidy amin'ny antsasaky ny vidiny ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » SkySafari sy NoLocation, fampiharana roa lehibe amidy fotsiny izao
Fanavaozana Philips Hue amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo switch dimmer sy sensor sensor
Ny mpiasan'ny Apple dia efa mizaha toetra ny Apple Pay Cash